EXCEL ကိုအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ MICRO စနစ်နဲ့အခြားသော ENABLE သို့မဟုတ် DISABLE လုပ်နည်း - EXCEL ကို - 2019
Microsoft က Excel ကိုအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော Enable သို့မဟုတ် disable
Notebook ပျံ့နှံ့၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက် backlit ကီးဘုတ်ထည့်သွင်းဆော့ဖျဝဲဖှံ့ဖွိုးတိုးတကုမ္ပဏီများမှတို့တွင်အဘယ်သူသည်။ ASUS ကထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူမော်ဒယ်တစ်ဦးကြီးမားသောအရေအတွက်ကဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သို့သော်အချို့အသုံးပြုသူများအလင်းအိမ်အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျကြသည်, ဤပြဿနာကိုချက်ချင်းဝယ်ယူ devaysa ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်သို့မဟုတ်အချို့သောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပြဿနာကိုဆုံးအပေါငျးတို့သရရှိနိုင်နည်းလမ်းများမှာကြည့်ပါ။
ကျိုး backlit လက်ပ်တော့ကီးဘုတ် ASUS ကအတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်
သငျသညျဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ပြဿနာကြုံတွေ့ရကြသည်ဆိုပါကသင်ကဖြေရှင်းကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးအကျင့်တို့နှင့်ခင်မင်သိကျွမ်းရအကြံပြုလိုတယ်။ ကျနော်တို့အများဆုံးရိုးရှင်းသော, အစွန်းရောက်ဇာတ်သိမ်းနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပြဿနာကိုပြင်ပေးရန်အလို့ငှာအက်ဥပဒေ။
Method ကို 1: ကီးဘုတ်နောက်ခံအလင်းတွင်
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်, အထူးသဖြင့်အခုမှစများနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ ASUS ကထံမှနည်းပညာကိုအကျွမ်းတဝင်နေသောသူတို့က, အလငျးအပေါ် switched နှင့်ကီးဘုတ်ပေါ် function ကိုသော့သုံးပြီးထိန်းချုပ်ထားကြောင်းမသိရပါဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မျှမချွတ်ယွင်းလေ့လာတွေ့ရှိသည်ပဲအထူးပေါင်းစပ်၏အလင်းရောင်ကိုသက်ဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်အပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များ, အောက်က link ကိုပေါ်မှာငါတို့စာရေးသူအနေဖြင့်အခြားဆောင်းပါးထဲမှာဖတ်ပါ။
အသေးစိတ်: ASUS ကလက်တော့အပေါ်ကီးဘုတ်နောက်ခံအလင်းဖွင့်
Method ကို 2: Driver Installation ဆို ATK
ကီးဘုတ်ပေါ်တက် setting နှင့်နောက်ခံအလင်း၏ activation ဘို့တိကျတဲ့ယာဉ်မောင်းမှကိုက်ညီ။ ဒါဟာ function ကိုသော့ရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်တဲ့ software ကိုနေရာချထားခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန် ASUS ကကနေလက်ပ်တော့များကိုင်ဆောင်သူအောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်:
ပေါ်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဝန်ဆောင်မှု" နှင့်အမျိုးအစားကိုသွား "ပံ့ပိုးမှု".
ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ, သင့် Laptop ကိုမော်ဒယ်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ပြသရလဒ်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏ page ကိုသွားပါ။
သင်၏ operating system version ကိုထည့်သွင်းရန်သေချာပါစေ, နှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်အာရုံစိုက်။
အခုတော့ရရှိနိုင်ဖိုင်တွေရဲ့စာရင်းဖွင့်လှစ်။ ၎င်းတို့အနက်ကိုရှာဖွေ « ATK » နှင့်ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ် "ဒေါင်းလုပ်".
မဆိုအဆင်ပြေ Archiver ကနေတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ် folder ကိုဖွင့်ပါနှင့်အမည်ရှိသောဖိုင်တစ်ခုကို run installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါ Setup.exe.
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows အတွက် Packer
installation ကိုပြည့်စုံဖြစ်တဲ့အခါ, မှတ်စုစာအုပ်ကို restart ချလိုက်ပါပြန်နောက်ခံအလင်းဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ပါက, ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးအဟောင်းတွေဗားရှင်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အတူတူပင်စာမျက်နှာပေါ်မှာ reinstall, ပထမဦးဆုံးအနေတစ်ဆင့်လက်ရှိဆော့ဖျဝဲကိုဖယ်ရှား "Device Manager" သို့မဟုတ်အထူးဆော့ဖ်ဝဲ။
ထို့အပြင်တှငျကြှနျုပျတို့သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်တစ်ဦးအပိုဆောင်းပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ သူမသည်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အင်တာနက်ဖိုင်တွေအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်စိစစ်သည်။ အောက်ကလင့်ခ်မှာဆောင်းပါးထဲမှာခင်မင်သိကျွမ်းဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်များ၏တစ်ဦးစာရင်းကိုအတူ။
Method ကို 3: Keyboard ကိုအစားထိုး
ကီးဘုတ်တစ်ဖဲကြိုး cable ကိုကနေတဆင့်တစ်ဦး Laptop ကို Motherboard နဲ့ချိတ်ဆက်နေသည်။ အချို့မော်ဒယ်မှာတော့သူတို့စိတ်မချရသို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပျက်စီးဖြစ်ကြသည်။ ဆက်သွယ်မှု Breaking နှင့်လက်တော့ disassemble ဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်။ အဆိုပါနောက်ခံအလင်းအပေါ်နှစ်ခုသည်ယခင်အလှည့်မကူညီဘူးလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့အချို့ကိုသင်အဆက်အသွယ်ပျက်စီးခဲ့သေချာလျှင်ကီးဘုတ်ပြဿနာတစ်ခုရှာဖွေရေးမှာသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်အစားထိုးရန်န်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားပစ္စည်းအတွက်ဖတ် ASUS ကပစ္စည်းတွေအပေါ်အစားထိုးအပေါ်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှု။
အသေးစိတ်: အကိုအစားထိုးကီးဘုတ် ASUS ကလက်ပ်တော့ကိုဆုံးမ
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးအဆုံးသတ်မှကြွလာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အကျယ်ချဲ့ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Laptop ကို ASUS ကများ၏ကီးဘုတ်ပေါ်ကကျိုးထင်သာမြင်သာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့အားလုံးကိုရရှိနိုင်နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ညွှန်ကြားချက်ကူညီပေးခဲ့သည်နှင့်အသင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြမျှော်လင့်ပါတယ်။